Shirka Caafimaadka Adduunka G20: Waa inaan si dhakhso leh ugu tallaalnaa adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Shirka Caafimaadka Adduunka G20: Waa inaan si dhakhso leh ugu tallaalnaa adduunka
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Investments • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Shirka Caafimaadka Adduunka
Kaqeybgalka ilaa 20 madax dowladeed iyo dowlad iyo 12 hay'adood oo caalami ah ayaa qaab feker ahaan ah loogu fuliyay shirkii caafimaadka adduunka ee G20 ee lagu qabtay Villa Pamphilj ee magaalada Rome, talyaaniga, jimce, May 21, 2021.
Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu hoosta ka xarriiqay muhiimadda aan caadiga ahayn ee iskaashiga caalamiga ah.
Arrintaan, Shirka Caafimaadka Adduunka ee G20 wuxuu ka hadlay habka horay loogu socdo ee lagu bogsiinayo adduunka iyada oo loo marayo tallaallada.
Hogaamiyeyaasha adduunka oo dhan waxay u heellan yihiin lacag iyo tabarucaad tabarruc ah si wax looga qabto caafimaadka iyo saameynta dhaqaale ee coronavirus.
Shirka Caafimaadka Adduunka waxaa guddoominayey Raiisel Wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi iyo Madaxweynaha Guddiga EU, Ursula von der Leyen. Shir-madaxeedka waxaa loo arkaa inay fursad u tahay G20 iyo dhammaan hoggaamiyeyaasha lagu casuumay (si shiid ah) si ay ula wadaagaan "casharrada" laga bartay cudurka hadda socda si loo hagaajiyo jawaabaha dhibaatooyinka caafimaad ee mustaqbalka.
Saciid Draghi: “Waa inaan tallaalnaa adduunka oo aan si dhakhso leh u qabannaa. Aafada ayaa hoosta ka xariiqday muhiimadda aan caadiga ahayn ee iskaashiga caalamiga ah. Ka qaybgalayaasha oo ka socda saynisyahanno, dhakhaatiir, samafalayaal, iyo dhaqaaleyahanno, waan fahmi doonnaa waxa qaldamay. ”
Raiisel wasaaraha Talyaaniga oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri: “Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo kooxda khubarada cilmiga ah, gaar ahaanna agaasimayaasha wadajirka, Professor Silvio Brusaferro iyo Professor Peter Piot. Warbixintaadu waxay siisay hagitaan lagama maarmaan u ah wada-tashiyadayada iyo, gaar ahaan, Baaqa Rome ee aan maanta soo bandhigi doonno. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo in ka badan 100 ururada aan dowliga ahayn iyo kuwa bulshada rayidka ah ee kaqeyb qaatay wadatashiga la qabtay bishii Abriil iyadoo lala kaashanayo Rayidka 20. Waa muhiim in la ogolaado qulqulka alaabta ceyriinka ee talaalka oo bilaash ah.
“Midowga Yurub wuxuu dhoofiyay qiyaastii 200 milyan oo qiyaaso ah; gobolada oo dhan waa inay sidaas oo kale sameeyaan. Waa inuu jiraa isku dheelitirnaan xagga dhoofinta ah ee dalalkaas saboolka ah. Waa inaan qaadnaa xayiraadaha guud ee dhoofinta, gaar ahaan dalalka ugu saboolsan.
“Nasiib darro, dalal badan ayaan awoodin inay iska bixiyaan qarashka tallaalkan. Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan ka caawinno wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo oo ay ku jirto Afrika inay soo saaraan talaalkooda.